I-Toodyay Art Shack kuMlambo waseAvon
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguPaul
I-Toodyay Art Shack ikufutshane nombindi wedolophu, umlambo we-avon, izithuthi zikawonke-wonke. Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa ye-ambience, iimbono, abantu, ubugcisa, indawo. Indawo yethu ilungile kumaqabane, abahambi, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), amaqela amakhulu, kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya). Cebisa, eli ngamava akude kumava akho esiqhelo endlu kwaye ukuba ujonge into eyahlukileyo kunye neyoluntu ke i-Art Shack inokuba yeyakho. Nceda ufunde uphononongo kuzo zonke iisayithi zewebhu.
I-Toodyay Art Shack kuMlambo i-Avon yi-Stayz Holiday Home Awards Finalist 2019.
Umgwebi odumileyo, uWendy Moore ebethetha ngale ndawo malunga nepropathi yakho: Ukuthatyathwa ngendlela emangalisayo kwale mihla yeshedi yaseOstreliya enophawu, oku kuthatha isitayile esipholileyo se-rustic ukuya kwinqanaba elitsha. Imbonakalo entle, kunye nesitayile esingathandekiyo.
Ukuthatha ityotyombe langoku | 'hi end glamping' ukuphila | indawo yokuhlala kumgca kaloliwe waseAvon Valley. Ifumaneka kwiibhanki ezisemaphandleni zoMlambo i-Avon, unokuphumla kwaye uphefumle umoya ococekileyo welizwe. Esi sakhiwo sobugcisa sizaliswe kwaye sanamhlanje ngokupheleleyo kunye nentente ephefumlelweyo yophahla, iingcango ezityibilikayo zidala amagumbi abe yinxalenye yomhlaba, izindlu zangasese ezivulekileyo zangoku, kunye nendlu yangasese yangaphandle inombono wamathafa e-Avon. Kukho iidekhi zabucala ezisezantsi neziphezulu ezinebhafu yangaphandle yamagorha. Umthombo wempembelelo. Qaphela: Eli lityotyombe kwaye ngenxa yoko linendawo ethile yobuchule yokusetyenziswa kunye nemathiriyeli kunye novavanyo loqhelaniso lwesithuba, abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 banokufuna ukubeka iliso.
Ukudityaniswa kwenkumbulo kunye noyilo kudibana ukudala le mozulu, i-regressive, iqhekeza lendawo yokuhlala. I-Toodyay Art Shack izisa kunye iminyaka engama-25 yamava kubugcisa kunye noyilo, iimbasa ezininzi zoyilo, ulwakhiwo olukhethekileyo lwale mihla, ingqokelela yobugcisa be-eclectic yabucala kunye nokufikelela kwendawo ekutyeni kukaToodyay, iwayini kunye nendawo yayo emangalisayo.
Qaphela: Eli lityotyombe kwaye ngenxa yoko linendawo ethile yobuchule yokusetyenziswa kunye nemathiriyeli kunye novavanyo loqhelaniso lwesithuba, abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 banokufuna ukubeka iliso.
Kukho ubuninzi bobomi beentaka zeentaka kwithafa lezikhukhula kwaye nevuba elingaqhelekanga liyabhabha. Ngeembono ezingaphazamisekiyo zeenduli kunye nembonakalo yomhlaba ejikelezileyo ukusuka kwinqanaba eliphezulu. Kukho iingoma zokuhamba phambi kwepropathi ezivumela ukufikelela kwiindidi zeenkuni ezikhukulayo. Itafile enkulu yepiknikhi ibekwe kumgangatho ophezulu kwaye inika ukukhanya okumangalisayo kumaphandle ajikelezileyo ngakumbi ekuzeni kokusa nangokuhlwa. Ikhalenda yokubhukisha imisela umjikelo wemozulu wonyaka kumaxesha ama-6 e-Nyoongar kune-4 yaseYurophu.
Yakhiwe kwiphalethi evuselelayo yezitena, iplanga kunye nentsimbi, kwaye idityaniswe ngendlela eyenza ukuba ufune ukubamba yonke into, le yindlu efuna ukuba uyazi ukuba yakhiwe ngesandla. Indlu ikrwada, ngandlel' ithile ikhumbuza ngakumbi intente okanye indlu yomthi kunezindlu ezizitena ezintathu ezingaphambili kwidolophu yasePerth.
Ukusuka kwisitrato, le ndlu inikezela njengendlu yendabuko; Iveranda yayo yentsimbi ebanzi enezipali zamaplanga ilingana nomfanekiso wento onokulindela ukuyibona kwidolophu yasemaphandleni. Indlu ngokukhawuleza iguqula, nangona kunjalo, kwaye ibonise ukuba yinto elindelekileyo.
Inezinto ezininzi ezifanayo kunye noyilo lwakudala, oluphendula indawo esinokuthi sicinge njengezindlu zasefama 'zemveli' kunye namatyotyombe aselwandle; Uyilo oluthathela ingqalelo indawo yabo malunga nelanga, imozulu kunye namaxesha onyaka. Xa kuthelekiswa noko ngoku sele kujongwa njengesitayile 'esiqhelekileyo' sekhaya e-WA - isitena esonqenayo, esine-humdrum kunye 'noyilo' lwethayile olubonakala lunwebeka ngokungenasiphelo kunxweme lwethu ukuya kwiinduli zethu - le ndlu ayiqhelekanga ngokwenene, kodwa ngenxa yokuba. isabela kwindawo yayo endaweni yokuyibetha ngoyaba.
Ukulungelelaniswa kwezithuba ngaphakathi kwenza ukuba umntu anqumame kwaye acinge ngomsebenzi wabo ngendlela amakhaya amaninzi angayifuni ngayo. Iziko ngundoqo ofudumeleyo; ikhitshi, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuphumla elinendawo eyomileyo, elawulwa sisitovu seenkuni esibaselwa ubushushu kunye nesilingi yekhonkrithi ekhutshiweyo engasebenziyo ukuze ihlale ingaphakathi. Isikhumbuza ngezindlu zoovulindlela kunye nobusuku obubandayo etyholweni, ngelixa ikwavula. phezulu nakweyiphi na isiphelo ukuya kwidesika ebanzi ngeentsuku ezishushu kunye nempepho epholileyo.
Phuma kumbindi wendlu kwaye amagumbi avuleleka ngakumbi. Imisebenzi elindelekileyo kunye neentshukumo zichazwa ngokutsha xa ufika kumagumbi okuhlambela umntu kufuneka aphumele kwiiveranda ezijikeleze indlu. Yindlela eyahlukileyo kakhulu yokuphila.
Ukuthatha izinyuko ukuya kumgangatho wokuqala kukuzisa kumgangatho omkhulu ovulekileyo kunye namagumbi amancinci amathathu ahlukeneyo ajikeleze kuyo-istudiyo, igumbi leti, kunye nenqaba yokulala. Ukulindela indawo yangaphakathi kwaye endaweni yoko uzifumane kwi-balcony egqunyiweyo enombono weenduli ngumzuzu wolonwabo.
Umntu unokucinga ehleli phantsi kophahla kunye nabahlobo okanye usapho, ukwabelana ngesiselo njengoko ilanga litshona ngaphambi kokuba ubuyele kwigumbi lakho lokulala / lokufunda / lokudlala.
"Ukubona umlambo uhamba ukusuka kumgangatho wokuqala, ubona ukutshona kwelanga emva kwenduli ewela umlambo yonke imihla, uziva uqhagamshelwe kubomi beentaka ezityebileyo ze-floodplain - yonke imihla yahlukile kwaye indlu ivumela yonke into,"
Ekuhlaleni kwiTyotyombe loBugcisa, singathanda ukwabelana ngale ngqokelela yobugcisa bemifanekiso emangalisayo yanamhlanje kunye nemifanekiso eqingqiweyo evela kumagcisa asekuhlaleni aseNtshona Australian kuquka uMerrick Belyea, uJon Tarry, uPaul Caporn, uNic Crompton, uMichael Doherty, uIvan Bray, uPillip Berry, uDante. Beela-Ruth, Clayton Bradbury, Clint Walker, Briony Paul, Chris Ha, Geoff Green-Armitage, Pippin Drysdale, Marcus Canning, Emma Langridge, Charlton Sadlo, John Cullinane, Theo Koning, George Howlett, Marian Giles, Marcia Espinosa, Gloria Regan UJackson, uSusan Roux, uZhanna Kolpakova, uSharon White kunye noTom O'Hern (igcisa laseTasmanian). Nceda uzive ukhululekile ukusazisa ukuba ungathanda ukuqhagamshelana nawaphi na amagcisa.
Ikhitshi lilungiselelwe ukuzenzela ukutya kwaye lineoveni esebenza ngeendlela ezininzi, umphezulu wokupheka ngegesi, i-oveni yomlilo yeemitha, ukufudumeza ibhokisi yomlilo kunye nefriji enkulu. Ibekwe kakuhle kunye nezinto zokupheka, izixhobo zombane, izitya, iglasi kunye nekhitshi.
Iitawuli, ilinen yokulala, izigqubuthelo zomandlalo, iileyile, imiqamelo, amalaphu etafile kunye neetawuli zeti zinikezelwa.
Nceda uqhagamshelane noPaul Wakelam Architect ngayo nayiphi na imibuzo kwipropati onokuba unayo.
Iifoto nguLuke Carter Wilton
Njengoko kubonisiwe kwi
Ilaphu ukukhutshwa ngekota#2 (kwi-Inshorensi)
Imagazini eluhlaza enguNombolo 56
Ityotyombe eliphucukileyo-Ukutshintsha kweMithi eYilayo efihlakeleyo
I-Toodyay Shack idweliswe kuluhlu lweeMbasa zaNgaphakathi zokuGqwesa ngo-2017 (IDEA) kudidi lweNdlu eNye
I-Toodyay Shack ifakwe kuluhlu olufutshane lweeMbasa zeNdlu ngo-2017 (kuZwelonke ngaphezu kweCandelo le-200m2).
Archizine kunye namakhonkco ahlukeneyo:
phantsi koPaul Wakelam Architect
4.56 ·Izimvo eziyi-89
4.56 · Izimvo eziyi-89
Iziko ledolophu yaseToodyay yimizuzu nje embalwa yokuqhuba apho uya kufumana iToodyay Bakery, enekofu entle kwaye ingumvelisi wePastie eNgcono yaseOstreliya. Kufuphi nevenkile yokubhaka yiKrisimesi 360, enye yeevenkile ezibalaseleyo zaseOstreliya zeKrisimesi. IiWineries kule ndawo zikufanele ukutyelelwa, kubandakanya i-Coorinja yezibuko eligqwesileyo kunye ne-Alicia Estate apho i-honey mead yenziwa ngeendlela zesintu.
I-Toodyay ikwanevenkile enkulu, ikhemesti, ivenkile ethengisa inyama, ivenkile yebhotile, ivenkile yeendaba, iposi, indawo yokucheba iinwele, indawo yokulungisa iinwele, i-pub, iicafe, iindawo zokutyela, amagumbi ogqirha kunye nezinye iivenkile kunye neenkonzo, zonke zingaphakathi kwe-1km ukusuka endlwini. IKlabhu yeGalufa ye-Toodyay ikwiikhilomitha ezi-5 kuphela emazantsi edolophu ukuba uziva ngathi ufuna ukudlala umjikelo okanye imbali ye-Toodyay oval ikumgama wokuhamba wepropathi.
Uloliwe iAvon Link ubaleka ukuya nokubuya ePerth naseNortham yonke imihla. Ulwazi oluthe kratya malunga nokubhukisha kunye nemisebenzi yasekuhlaleni iyafumaneka kwiZiko loLwazi lweToodyay.
Sithanda ukuxoxa ngokuhlala kwakho nawe phambi kokuba ubhukishe ukuze uqiniseke ngendawo yokuhlala eyonwabisayo eToodyay Art Shack. Siyafumaneka ukuba sinxibelelane ngaphambili kunye nangokuhlala njengoko unokufuna. Ngokubanzi sinokubuyela kuwe kwiyure yesicelo sakho.
Sithanda ukuxoxa ngokuhlala kwakho nawe phambi kokuba ubhukishe ukuze uqiniseke ngendawo yokuhlala eyonwabisayo eToodyay Art Shack. Siyafumaneka ukuba sinxibelelane ngaphambili kun…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Toodyay